Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Rail njem » Ụgbọ oloko ọhụrụ dị ọnụ ala site na London ruo Edinburgh
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Rail njem • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Scotland Breaking News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ụgbọ oloko ọhụrụ dị ọnụ ala site na London ruo Edinburgh nwere ike mebie ọrụ ụgbọ oloko na ikuku ugbu a
Ntuli aka emere n'oge na-adịbeghị anya kpughere na 11% nke ndị na-aza ajụjụ ọnụ ugbu a nwere mmefu ego ezumike ala karịa pre-COVID, na 37% enweghị ike ịla ezumike n'oge na-adịghị anya yabụ a ga-anabata ọrụ ọnụ ala ọhụrụ.
Mbido ụgbọ oloko dị ọnụ ala nke Lumo na-ezukọ mmefu ego na nchegbu gburugburu.
Ụdị ọrụ ụgbọ oloko dị ọnụ ala nke Lumo nwere ike bụrụ ihe ama ama n'etiti ndị njem.
Agbanyeghị na ọrụ ahụ dị ọnụ ala, Wi-Fi n'efu na ntụrụndụ chọrọ ga-adịrị mmadụ niile.
Mwepụta Lumo nke ọrụ ụgbọ oloko dị ọnụ ala nwere ike mebie ọrụ ụgbọ oloko na ikuku ugbu a n'etiti London na Edinburgh. Ụdị ya dị ọnụ ala yana ilekwasị anya n'ibelata mmetụta gburugburu ebe obibi ga-adị mma maka ịgbanwere usoro ndị njem ka ngalaba na-agbake na ọrịa ọjọọ.
Ọrụ ụgbọ oloko dị ọnụ ala nke Lumo nwere ike bụrụ ewu ewu. Ndị njem Britain amarala ụgbọ elu dị elu na ọrụ adịghị mma nke, tupu COVID, na-ejupụta na mmadụ. Mwepụta nke ụzọ onye ọrụ mmefu ego ọhụrụ n'etiti Edinburgh na London ga -abụ ihe na -akpaghasị n'ihi enweghị asọmpi n'etiti ndị na -anya ụgbọ okporo ígwè na UK. Agbanyeghị na ọ dị ọnụ ala, Wi-Fi n'efu na ntụrụndụ chọrọ ga-adịrị mmadụ niile. Site na oge njem naanị nkeji iri karịa LNER dị ugbu a, Lumo nọ n'ọkwa nke ọma iji nweta uru n'ọma ahịa asọmpi.
Site na ịgbatị mmefu ego, iwebata ọrụ ụgbọ oloko dị ọnụ ala ga-eme nke ọma na ndị njem enweghị ego ebe agụụ ụlọ na-arịwanye elu na UK. Ọnụ ego dị ala ga -adị oke mkpa iji zaghachi mmetụta nke ọnụ ahịa ndị njem na -arịwanye elu. Ọtụtụ ndị enweela mmetụta ụkọ ego sitere na ọrịa na -efe efe nke na -eme ka mmefu ego ezinụlọ na njem njem sie ike. N'otu aka ahụ, nchoputa nke nyocha ndị ahịa nke 2021 kpughere na 62% nke ndị na -aza UK 'dị oke', 'ntakịrị', ma ọ bụ 'nwere oke' gbasara ọnọdụ akụ na ụba nke onwe ha, na -emekwu ka mkpa maka ọrụ ụgbọ oloko dị ọnụ ala.
Lumo na-asọ mpi £ 15 (US $ 20.78) nhọrọ ụzọ kacha ala nwere ike kpalite ọchịchọ njem n'etiti London na Edinburgh. A na-ahazi ọnụ ala dị ọnụ ala karịa ụgbọ elu dị ọnụ ala ma nwee ike tinye nrụgide asọmpi na easyJet na, ruo n'ókè ụfọdụ, British Airways. Ọnụahịa bụ isi ihe na-adọta omenala n'oge ọkwa mgbake COVID-19, Lumo nwere ezigbo usoro azụmaahịa maka ịga nke ọma.
O yikarịrị ka ndị njem ga -emetụta mmetụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na gburugburu ebe obibi dị. Nnyocha ndị ahịa Q1 2021 kpughere na 70% nke UK ndị na -aza ajụjụ a bụ 'oge niile', 'ọtụtụ mgbe', ma ọ bụ 'mgbe ụfọdụ' ihe a na -emetụta.
Lumo lekwasịrị anya nke ukwuu na ọ na -arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi, ọdịnihu na -egosi ụdị azụmaahịa ya. Ndị njem nke na -efekarị n'etiti obodo abụọ a nwere ike bụrụ ndị a ga -emegharị gaa na nhọrọ gburugburu ebe obibi na nke dị ọnụ ala karịa. Ịhọrọ ime njem n'ụgbọ oloko eletrik zuru oke nke Lumo na-efe efe ga-ebelata ikuku anwuru ọkụ nke njem ahụ ruo otu ụzọ n'ụzọ isii nke ofufe, dị ka onye ọrụ si kwuo. Ọzọkwa na-ekwusi ike na gburugburu ebe obibi ya, onye na-arụ ọrụ ga-enye 50% nri sitere na osisi ma bụrụ dijitalụ 100% iji zere mkpofu akwụkwọ. Site na nchegbu gburugburu ebe obibi ga -eto, mmegharị ahụ nwere ike ịhụ Lumo ka ọ bụrụ onye isi na -ahụ maka ụgbọ oloko maara gburugburu ebe obibi.